विवाहको लागि गुण मिलाउन – कसरी मिलाउने र के यो पर्याप्त छ ?
हामी कम गुण अंकको साथ धैरै जोडी देख्छौँ , जसले खुशकिो वैवाहिक जीवन विताइरहेका छन जबकी उच्च अंकको साथ अलग भएका पनि छन । । यो किनभने केटा – केटी को कुंण्डली मिलान गर्ने र गुण–मिलान एकै छैन समान छन पनि होइन । गुण मिलान सम्पूर्ण मिलान प्रक्र्रियाको १५ प्रतिशत मात्र हो । धेरै मानिसहरु कुण्डलीहरु मिलाउन पूर्णतया गुण–मिलानमा भर पर्दछन जसले प्रायः असफल विवाहको परिणाम दिन्छ ।
विवाहको लागि, आठ गुण मिल्नु पर्छ जुन अष्टमुकुट भनेर चिनिन्छ।
नाडी ( आठ अंक) - नाडी नक्षत्रको आधारमा निर्णय गरिन्छ (तारा चिन्ह जस्तै अश्लेशा, फाल्गुण आदि) कुल २१ वटा नक्षत्र छन्, जसलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ – अन्त्य, मध्य र आध्या । उत्तम अवस्थाका लागि – आठ अंक प्राप्त गर्नका लागि तपाईको नक्षत्र समूह बाहिरका यत्ति छनौट गर्नुहोस । अन्त्य, मध्य वा अध्यासँग म्याच गराउनुहोस् । यसले शारीरिक अनुकूलता र बच्चा जन्माउने क्षमतालाई दर्शाउदछँ । उस्तै नाडीका जोडीहरुले अक्सर गर्भवती हुने समस्याहरुको सामना गर्दछन । अंकहरु ८ वा ० हुन ।
भकुट (सात अंक) – यो भावनात्मक अनुकूलता हो, तपाइँको आरोही वा लग्नमा आधारित (जन्मको समयामा पूवाी क्षितिजमा तिन्ह) । केहि ग्रह संयोजनहरु अधिक अनुकूल छन् । दबै साझेदाहरुको एक अर्काको भावनात्मक आवश्यकताहरुमा संवेदनशीलता दर्शाउछन । अंकहरु ७ वा ० हुन ।
गुण( छ अंक ) – प्रत्येक व्यक्ति ३ गण – वर्ग , देवता, राक्षस र मानव (इश्वरीय, राक्षसी, मानव) मा वर्गीकृत गरिएको छ । यो एक व्यक्तिको आधारभूत प्रकृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जस्तै देवताहरु अन्र्तमुखी, साधारण जीवन आदि हुन जबकि राक्षस बढी आक्रामक हुन सक्छन इत्यादि । वेस्ट म्याच तपाईँ जस्तै गण हो । दोस्रो उत्तम म्याच देव मानवसँग हो वा राक्षस मानव सबैभन्दा नराम्रो विपरीत हो । अंकहरु ६,५ वा0हुन ।
मैत्री (पाँच अंक) – चन्द्रमा चिन्ह वा राशीको ग्रह अनुकूलतामा आधारित । पारस्परिक रुचि, मनपर्ने र मन नपर्नेको आधारमा एक अर्कोसँग मित्रता विकास गर्न दम्पतीको क्षमता दर्साउँछ । अंकहरु ७ वा0हुन ।
योनी (चार अंक) – फेरि नक्षत्रमा आधारित । आकर्षण र एक अर्कालाई सन्तुष्ट गर्ने क्षमताको सर्तमा शारीरिक अनुकूलता दर्साउँछ । सबै स्वास्थ्य र शरीर मा पनि प्रभाव ।
दीना वा तारा (तिन अंक) – नक्षत्रमा आधारित दम्पतीको दीर्घायु र विधवा हुने सम्भावना संकेत गर्दछ ।
वाश्य (दुई अंक) – नक्षत्रमा आधारित दम्पती बीचको आपसी स्नेह र मनोरञ्जनात्मक प्रेम संकेत गर्दछ ।
वर्ण (एक अंक) – व्यावसायीक प्रकृति र अनुकूलता जनाउँछ । उदाहरणको लागि केहि व्यक्तिहरु अनुसन्धान र अध्ययन गर्न मन पराउँछन , अरुले काम गर्न रुचाउँछन इत्यादि ।
कुल अंक ः ३६
अठार अंक भन्दा कम विवहको लागि उपयुक्त मानिदैन । २० भन्दा माथिको केहि मिल्दो मानिन्छ । २८ भन्दा बढिले सहज र सुखी वैवाहिक जीवनलाई जनाउँछ ।
यदि तपाई वास्तविक खेलको लागि जान चाहानु हुन्छ भने , महत्वपूर्ण छ कि निम्न कारकहरू विचार गरिनु पर्छ :
१. तत्व – आगो, पानी,हावा, पृथ्वी । अदाहरण ः तिनीहरुको कुंडलीमा प्रबल आगो तत्व भएका व्यक्तिहरु छिटो स्वभावका हुन्छन । यदि दुबै (दुलही र दुलही) सँग यस तत्वको प्रशस्तता छ भने , तिनीहरुले आफ्नो जीवनको प्रायः एक अर्कासँग झगडामा विताउँछन ।
२. योग – प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो चार्टमा एक वा बढी योग छन । उदाहरण ः राज योग, सरस्वती योग । योगहरु त्यस्तो हुनुपर्दछ कि उनीहरुले एक अर्काको चार्टमा उत्तम ल्याउँदछन ।
३. दशा – सरल शब्दहरुमा , यो समय अवधि ध्यान राख्न पर्दछ । दुबै एक नै समयमा पुरुषिक ग्रहको अवधि को माध्यम बाट हुँदेन ।
४. दोशास – यसको मतलब नकारात्मक वा समस्या पैदा गर्ने योगहरु हो । योगहरु जस्तै , प्रत्येक व्यक्तिको चार्टसँग दोशास पनि हुन्छ । एकले हेर्नु पर्छ कि दुबै चार्टहरुमा दोशाहरुले कुनै पनि नकारात्मक पक्षलाई सामूहिक रुपमा बलियो पार्नु हुँदैन । यसले कुनै ठूलो समस्याको कारण दिन्छ ।उदाहरण ः मांगलिक दोशा
मिलानको प्राथमिकता क्रममा गुण मिलान नम्बर ५ मा आउँछ (नम्बर १ सबैभन्दा महत्वपूर्ण ) यदि शीर्ष ४ पूर्ण रुपमा मेल खान्छ भने गुण मिलानलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईं गुण मिलान र अन्य महत्त्वपूर्ण कारकहरू सहित कुंडली मिलानको बारेमा थप विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने च्याट वा भिडियो कल द्वारा कृपया हाम्रो सम्मानित ज्योतिषीहरूको समूहसँग परामर्श लिनुहोस्। तपाईंको र तपाईंको जीवनसाथीको कुंडली प्रदान गर्नुहोस् र हाम्रो विज्ञ गुरुले आवश्यक सुझावहरू दिनेछन्।